Taombaovao Manaraka ny Fihodin’ny Volana, Fanorisorenana no Hitan’ny Tanora Shinoa Aminy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2017 17:39 GMT
Fotoana tena mety ho fampihaonana ny fianakaviana ao Shina ny taombaovao manaraka ny volana, ary efa fomba fanaon'ny tsirairay ny miverina mitsdika ny ray sy reniny ary ireo havany akaiky any amin'ny vohitra niaviany any ambanivohitra any, ka amin'izany dia ny fifampirariana soa sy ny resaka ary ny fofona tsipoapoaka no mameno ny rivotra iainana.
Isantaona, antony iray miteraka ny fifindran-toerana goavana indrindra ataon'olona marobe manerana izao tontolo izao io fety io, miarka aminà Shinoa 410 tapitrisa mandray ireo arabe any amin'ireo tanàna lehibe ho any amin'ny tanàna niaviany mba hamonjy ny fianakaviany. Amin'ity taona ity, nilatsaka ny 26 Janoary ny fiaretantory niandrasana ny taombaovao, ary ny herinandro talohan'io no nanomboka ny fifindran-toerana fanao isantaona. Nozarain'i @Love_Stony tao amin'ny Twitter ny sary voafantina navoaka momba ny andraikitra sarotra tanterahana, izy tsy inona fa ny dia hiverina any amin'ny fianakviany hiatrika ny taombaovao manaraka ny volana.
— TEAM_MARVEL🇺🇸 (@Love_Stony_) le 21 janvier 2017
Na mahantra ianao na manana, modia rehefa Taombaovao
Kanefa, somary niova kely ny fironana ho amin'ireny fifindran-toerana ireny tato anatin'ny taona vitsivitsy, mihamitombo ny olona misafidy ny mandeha any ivelany mandritra ny fotoanan'ny fialantsasatra, ho fomba hialàna tanteraka amin'ny fivoriam-pianakaviana. Eny anivon'ny andian-taranaka tanora indrindra indrindra, betsaka no mahita hoe mandreraka ilay fifanakalozana firariantsoa amin'ny taombaovao sy ireo resadresaka ifanaovana amin'ny fianakaviambe momba ny tokantranony sy ny vola raisiny.
Ny fanamarihan'i Seaya ao amin'ny Weibo dia ampy hahalaza izay ao any an'eritreritr'ireo tanora ao Shina:
Mba marina, halako ny mankalaz any taombaovao manaraka ny volana, ary izany dia hatry ny fony aho mbola kely. Manelingelina ny fiainantsika andavanandro [ilay fety], manery antsika hifanerasera amin'olona maro sy hifanditra momba ny fianakaviana iarahana mandany alina fiandrasana ny taona vaovao [any amin'ny dadabe sy bebe avy amin'ny lahy sa ny an'ny vavy]. ……Lasa takalonain'ny fifamatorana noho ny rà iaisana isika ary manilikilika ny hafa. Afaka ny hahita ny fianakaviantsika isika amin'nyu fotoana rehetra, mandritry ny taona. Nahoana no ilaintsika ny manao izany amin'ny tambaovao? Heveriko fa ny fanerena ny olona hody mba hankalaza ny taombaovao dia tetikadin'ny governemanta mba [hanaitairana ny toekarena].
Raha mihamatroka no fahitan'ny sasany ny tontolo manodidina ny fety, noho ny firoborobon'ny fanaovana tanàndehibe ao Shina, izay nanova vohitra maro ho lasa tanàna rakotra tranobe sy niteraka fahalotoan'ny rivotra iainaa amin'ny fetra avobe, ny hafa kosa misisika milaza fa manorisory ilay fombandrazana na izany aza.
“Light Cloud and Wind” ao amin'ny Weibo dia isan'ireo tsy mankasitraka ilay fombandrazana:
Manakaiky ny taombaovao ary manahirana ny saiko izany. Halako ny taombaovao manaraka ny volana efa hatramin'ny fahazazàko. Mbola tsroako hatrany ny rainay niteny mba hisorohana ny tsy hamakiana kaopy na lovia ny harivan'ny andron'ny taona vaovao, satria mitondra loza. Tena hendratrendraha izahay mandritra ny fotoana fisakafoana ka lasa zary tsy misy fankafizana ny sakafo mihitsy. Halako ilay fombafomba fanao mifampirary soa, vao maraina be, mandritry ny fotoanan'ny taona vaovao. Halaka ny tabataba ateraky ny tsipoapoaka sy ny mah-jong ary ny fofon'ireo fanasàna. Halako ny taombaovao! Tsy sangisangy.
Raha tokony hoe hiverina hody any aminy, betska ny olona no misafidy ny mandeha mivahiny any ivelany mandritry ny fotoana fialantsasatra.
Tamin'ity taona ity, tratra ny isa faratampony Shinoa 6 tapitrisa — manankatao ny ankamaroan'izy ireny — nanambara fa any ivelany no novinavinainy handaniana ny andro fialantsasatry ny taombaovao shinoa.
Thaïlande, Japàna ary Etazonia no tena toeram-pitodiana be mpifidy indrindra, miaraka amin'i Korea Atsimo, lasa tany amin'ny toerana fahafito raha fahatelo tamin'ny taona lasa, araka ny tatittry ny Ctrip, ilay masoivoho ao Shina lehibe indrindra ety anaty aterineto mikarakara fivahinianana.
Manaraka ny tondrozotran'ny politikan'ny governemanta ny sasany amin'ny fankafizana ny safidy amin'ireny toerana haleha ireny.
Ohatra, i Korea Atsimo dia lasa tsy dia malaza loatra eny aminìireo Shinoa mpizahatany taorian'ny nibaikon'ny governemanta shinoa ireo masoivoho mpikarakara fivahiniana mba hampihena ny fikarakaràna fahazoandàlana mankany Korena Atsimo, ho setrin'ny fifanarahana ara-tafika nifanaovan'ny governemanta koreana tatsimo tamin'i Etazonia ho fanapariahana ilay rafitra Fiarovana Bala Afomanga Mahatakatra ny any an'habakabaka any.
Tsy safidy lohalaharana intsony koa i Taïwan hatramin'ny fitomboan'ny fifanenjanan'ny fifandraisana misy amin'ny andaniny sy ny ankilany ao amin'ilay helodrano.
Vao andro vitsymonja izay, ny fitantanan-draharahan'ny Fizahantany nasionalu ao Shina dia niantso ampahibemaso ireo Shinoa mpivezivezy mba hanao ankivy ny APA, vondrona trano fandraisana vahiny an-dry zareo Japoney, taorian'ny nanambaràn'ireo shinoa marobe mpizahatany hoe nahita boky maro milaza fandàvana ny fisian'ny voloolona tao Nankin teny ambony talantalana tao amin'ny efitranon'ny hotely nisy azy izy ireo.
Na izany aza, tsy nampihena ny fientanentanan'ireo Shinoa hisidina ho any Japàna ny fifandraisana manidintsidina / marefo misy amin'i Shina sy Japàna, izay ny tontolo mambabo fo ao Japàna no manosika azy, ireo fotdrafitrasa maoderina, ny vokatra tsara voatra ary ny tolotra manana kalitao avo dia avo, laharana voalohany.
Esoeso no namadihan'i “Kung Fu Tiger” ao amin'ny Weibo ny tsy fahombiazan'ny Fanjakàna Shinoa namelona ny fitiavana tanindrazana manohitra ny japoney:
Toa Japàna no lohalaharana amin'ireo toerana fitodiana alehan'ireo miainga avy ao Shina, nefa i Thailand manone fahafahana miditra any aminy tsy ilàna fahazoandàlana. Be vava fotsiny manohitra an'i Japàna n Shinoa, saingy tia mandeha mankany mba hitsangantsangana sy hiantsena…